Yugnepal | महिमा चौधरीले किन गरिन् अचानक विवाह ?
आइतबार १४, मङि्सर २०७७ ०६:३६
महिमा चौधरीले किन गरिन् अचानक विवाह ?
Yugnepal 496 पटक पढिएको
१३ सेप्टेम्बर १९७३ का दार्जिलिंगमा जन्मेकी महिमा चौधरीको वास्तविक नाम रितु चौधरी हो। सन् १९९७ मा रिलीज भएको फिल्म ुपरदेशु बाट महिमाले बलिउड डेब्यू गरिन। फिल्ममा उनिसँग शाहरुख खान थिए। फिल्म अघि महिमाले आमिर खानसँग कोला ब्रान्डको विज्ञापनमा काम गरेकी थिइन् जसको चर्चा व्यापक भएको थियो । ुपरदेशु बक्स अफिसमा सुपर हिट भयो तर उनको क्यारियर भने निश्चित उचाइमा पुग्न सकेन।
लिएन्डरसँग छुटिएपछि उनले एक अन्तर्वार्तामा अनौठो खुलासा गरेकी थिइन् उनले लिएन्डर पेस मानिस नभएको बताएकी थिइन् । ुउनि एक राम्रो टेनिस खेलाडी हुन सक्छन् तर उनि एक असल मानव थिएनन् । उनले मलाई धोका दिए ।ु
चलचित्र छोडेपछि महिमा चौधरीले रियलिटी टिभी कार्यक्रम गर्न थालिन्। एक अन्तर्वार्तामा, उनले यसलाई आफ्नो करियरको अन्त्य भएको बताइन् । महिमाले भनिन्,ुएक्लो आमा भएको कारण फिल्ममा काम गर्न धेरै गाह्रो भयो।ु उनी पैसा कमाउन कार्यक्रमहरूमा जान थालिन्। रियलिटी टिभीमा पनि कार्यक्रमहरू गर्न थालिन्। जसको कारण उनको फिल्म क्यारियर समाप्त भयो।
सोमबार १३, असोज २०७६ १२:१६ मा प्रकाशित